Inomdla kwimidlalo yoMthombo ovulekileyo onokuyonwabela kwiLinux | Ubunlog
Kuyavunywa, ayisiyiyo eyona ixhaphakileyo, kodwa kutheni kungenjalo, abasebenzisi beLinux bayayithanda imidlalo. Ayisiyomfihlo ukuba uninzi lweemidlalo zePC, ukuba ayizizo zonke, ziyafumaneka kwiWindows kwaye uninzi lwazo luyavela kwi-macOS, kodwa inkqubo yokusebenza kaMicrosoft yeyona ndlela ilungileyo kubadlala abafuna kakhulu. Kubadlali abaqhelekileyo, nantsi enye Uluhlu lweyona midlalo ilungileyo ifumanekayo kwiLinux.
Ngaphambi kokuba ndiqale ngoluhlu ndingathanda ukucacisa ukuba liza kuvela kuphela izihloko zomthombo ovulekileyo okanye umthombo ovulekileyo. Ngokusengqiqweni, le midlalo ayinakukhuphisana nezitudiyo ezinkulu ngaphandle kokuba into esiyifunayo kukuchitha ixesha elithile sisonwabisa. Ngale nto icacisiweyo, ngoku siza kuthetha ngale midlalo ili-11 ingenakuphuthelwa kuyo nayiphi na i-Linux PC nakweyiphi na umdlali odlala ngamaxesha athile.
1 Imidlalo yemithombo evulekileyo ye-11 yeLinux
1.5 Imodeli emnyama
1.6 Iindawo zeVoxelands
1.7 Idabi leWesnoth
1.9 Imfihlo kaMaroyo yeziKronike
Imidlalo yemithombo evulekileyo ye-11 yeLinux
Ndicinga ukuba icacile ukuba luvela phi uluvo lomdlalo weemoto. Ukuba andiphazami, umdlalo wokuqala wolu hlobo wenziwa nguNintendo kwaye umlinganiswa ophambili wayefana nayo yonke into, odume ngemibhobho yamanzi uMario Mario (ewe, igama elifanayo kunye negama lokuqala). Umdlalo wokuqala, ndihlala ndisithi ukuba andiphazami, kunjalo Super Mario Kart, ke igama lenguqulelo yomthombo ovulekileyo yeLinux yayicacile: SuperTuxKart.
Kulungiselelwe abo bangaziyo nawuphi na umdlalo wolu hlobo, sijamelene ne umdlalo weemoto, kodwa hayi kwimidyarho yesiqhelo apho kufuneka sigxile ekukhawulezeni kunabachasi bethu, kodwa kwimidyarho apho kuya kufuneka senzakalise iintshaba zethu ngezixhobo kunye nezinto eziluncedo esizakuzifumana kugqatso.
Xa ndathenga iPC yam yokuqala, ndiyakhumbula ukuba phakathi kwezinto zokuqala endizenzileyo kukubona indlela umhlaba weQuake ovele ngayo. Ndandisele ndiyidlalile inyikima kwi-PC yomzalwana kunye neQuake 2 kwizihlobo, ndiye ndazimisela ukuyivavanya Inyikima 3 ibala. Ewe, umdlalo olungileyo odibanisa zonke izinto ezilungileyo malunga nesihloko, nangaphezulu, yiXonotic.
Ngapha koko, iXonotic ibandakanya ukuya kwiindlela ezili-16 zomdlalo eyahlukileyo, kubandakanya iD Deathmatch kunye nokuBanjwa kweFlegi. Izixhobo ezibandakanyiweyo kwiXonotic zinekamva eliqinisekileyo, eliqinisekisa ukuba yonke into iya kuba nomtsalane.
Ukuba ezakho ze Imidlalo yesicwangciso, eyona ilungileyo (yasimahla) onokuyidlala kwiLinux ibizwa ngokuba yi-0 AD Kule meko ngumdlalo osetelwe kwixesha lembali, kodwa ndicinga ukuba yonke enye into iyafana kakhulu nayo yonke imidlalo yeqhinga kwintengiso.
Ndikhumbula isibini samashumi eminyaka eyadlulayo, xa ndandingenayo iPC yam yokuqala, ndidlala umdlalo owawunamaqela amabini eentshulube ezi-4 ezazibulalana. Ndiyathetha Iifomo, apho sasilawula khona iqela leentshulube ekufuneka liphelise amanye amaqela eentshulube ezi-4 zisebenzisa zonke iintlobo zezixhobo, kwiibhombu, iibhokhwe eziqhushumbe, amanqindi okanye ukuhlaselwa ngumoya.
Njengemidlalo emininzi ekubonakala kuyo uTux, iHedgewars ngumthombo ovulekileyo womnye umdlalo, kule meko iWorms ekhankanywe ngasentla. Umahluko ophambili kukuba abalinganiswa abaphambili beeHedgewars ziihedgehogs (IHedgehog ngesiNgesi, yiyo loo nto igama layo).
I-Dark Mod ngumdlalo ekuya kufuneka senziwe kuwo lawula isela Kuya kufuneka usebenzise izixhobo ezahlukileyo ukunqanda izoyikiso kunye nokuqhubela phambili kwimeko. Oko sikubonayo ngumfanekiso womntu wokuqala wayo yonke into eyenzekayo, into esiqhele ukuyibona kwiFPS okanye kwimidlalo yokudubula yomntu wokuqala.
Ukulandela kancinci ngama-clones, umdlalo olandelayo kolu luhlu yiVoxelands, kule meko sisihloko esisekwe kudumo (nangona ngokobuqu andiqondi ukuba kutheni) iMinecraft.
Mna, ekufuneka ndivume ukuba andinguye umlandeli omkhulu wemidlalo yeqhinga, ndikonwabele ubuncinci imidlalo emibini yolu hlobo: IWarcraft II kunye neXCOM. Ndiye ndothuswa lixesha endilichithe ndidlala umdlalo isicwangciso esisekwe ekujikeni njengoko kungowesibini kwezi zimbini ndizikhankanyileyo, ngakumbi ngenxa yokuba isenzo siyatshintshana, ngokungathi yi-chess.
Idabi leWesnoth ngumdlalo weqhinga olusekwe ekujikeni, kodwa useto oluhle. Abadlali kufuneka balawule uthotho lwabalinganiswa, elowo eneempawu zakhe, de kube sifezekise injongo yeqonga okanye ukoyisa utshaba.
I-OpenTTD yifayile ye- Ukubuyiswa kwakhona komdlalo we-1995 wezoThutho iTycoon Deluxe apho kuya kufuneka silawule inkqubo yothutho lwenqila. Injongo yomdlalo kukwakha uthungelwano lwezothutho usebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezithuthi, ezinje ngoololiwe, iinqanawa, iinqwelomoya kunye neelori. Ukongeza, sizakufumana imali ngokwenza uhambiso oluthile, imali esinokuyisebenzisa ukwakha iziseko zophuhliso ezingcono nezisebenza kakuhle.
Imfihlo kaMaroyo yeziKronike
Igama "Imfihlo" livela kwisihloko salo mdlalo, kodwa akukho mfihlo sinalo isekwe kwisaga sikaMario Bros. Into emnandi ngesi sihloko xa ithelekiswa nezinye kukuba inika amava eqonga elingcono kunye neepuzzle ezisetyenzwe ngakumbi kuneminye imidlalo efanayo.
I-Pingus luphawu lomnye umdlalo wePC odumileyo obizwa ngokuba Imiba. Kuzo zombini iiPingus kunye nomdlalo esi sihloko sisekwe kuwo, injongo yethu kukufumana oonombombiya benze into abacelwe ukuba bayenze kwinqanaba ngalinye. Siza kusebenza njengohlobo "lothixo" ekufuneka ebakhokele ekufezekiseni iinjongo zabo.
Kwaye asinakugqiba olu luhlu ngaphandle kokongeza i- umdlalo wenqanawa. I-AstroMenace ikhumbuza kakhulu imidlalo yeenqanawa esinokuyifumana kwii-arcade ze-90s, kodwa umahluko obalulekileyo oza ngohlobo lokuphuculwa kwazo zonke iintlobo, into ebonakala ngokukodwa kwimizobo nakwisandi.
Nguwuphi umdlalo wakho ovulekileyo owuthandayo weLinux?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Inomdla kwimidlalo yoMthombo ovulekileyo onokuyonwabela kwiLinux
Usenayo intwana eseleyo apha. Yenza iinkqubo zeewindows zihambelane nelinux. Okanye wenze iinkqubo ezifanayo. Kungenxa yoko le nto ndisebenzisa iiwindows 7 kunye ne-linux ...
URichard Videla sitsho
Ingxaki ayikho ngepenguin ehlwempuzekileyo, ukuba ayingabo abavelisi besoftware abagxila kuphela kwi-windou $. Kodwa ekhaya asixhomekekanga kwiifestile senza yonke into ngeGNU / Linux !!!
Phendula kuRichard Videla
Ndingabeka umzekelo Widelands, FreeCiv, FlightGearSimulator, LiChess, Pioneer Space Sim, wz2100, UFO AI, Speed ​​Dreams .. 😉
NgeSteam kubonakala ngathi izinto ziyatshintsha
Kwakhona iFreeorion kunye neWarzone 2100
nayo i-Red Eclipse, nangona iphelelwe lixesha
IiDayimani zeRock eziyimfuneko
UCarlos Flores sitsho
Khuphela i-Astro Menace ngoku.
Ngaba umntu unokundinceda ndiyifake (
UGerson Celis sitsho
Kukuphi ukusetyenziswa kokucebisa imidlalo ukuba abayithethi ukuba bayifumana phi kwaye bayifaka njani? Umzekelo Imfihlo yeMaryo yeziKronike kunye neMody emnyama azikho kwivenkile yaseGnome (Ubuntu Software)
Phendula kuGerson Celis
UJulian Veliz sitsho
Kulula ukuyifaka ngeFlatpak. https://flathub.org/apps/details/com.viewizard.AstroMenace
Qiniseka ukuba ulandela isikhokelo sokusetha ngaphambi kokufaka
flatpak faka i-flathub com.viewizard.AstroMenace
I-flatpak isebenza com.viewizard.AstroMenace
Phendula uJulian Veliz
Louis imithombo sitsho
i-chromium bsu, i-opentyrian, izikumkani ezisixhenxe, i-sauerbraten / cube2, i-xonotic, nexuiz, i-supertuxkart, i-minetest, idabi le-wesnoth, i-ad ye-0, isantya samaphupha / i-torcs, phantsi kwesibhakabhaka sentsimbi, i-doom3, buyela kwinqaba ye-wolfenstein, i-quake3, i-dosbox, i-scummvm, I-retroarch, ihlengethwa, ii-pcsx2, njl. iwayinihq kunye nezakudala kude kube ngu-2007 kunye nomphunga okhulayo ngomdlalo weproton kwinkxaso.
Phendula uLuis Fuentes